Fahatam-bokatra fotsy amin'ny rindrina fanongotana
Home / Fitaovana an-dakozia / WOWOW Faucet an-dakozia fotsy misintona
Ny baobom-basy fotsy lakozia fotsy dia manana endrika ivelany sy maoderina, ary misy fiantraikany amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny fanoherana.
Ny kiraro avo any an-dakozia EVE-0071-fotsy dia mitondra endri-javatra marevaka sy tsotra. Ny tsipika milamina sy marevaka manampy vatosoa tsotra ho an'ny toerana misy anao ao an-dakozia. Ny endrika fanoratana ambany dia manamora ny fifehezana ny mari-pana sy ny mikoriana, fa ny fotsy kosa manampy ny hatsaran-tarehy sy ny fomba. Ny famolavolana fihodinana miaraka amin'ireo asa roa sosona dia manatsara ny fampiharana ary mifanaraka amin'ny zavatra ilaina amin'ny hetsika mahandro. Ity gropy azo ampiharina sy mahafinaritra ity dia mampiavaka ny lakozia anao.
Ny lohan'ny tsiranoka miaraka amina bokotra fanindriana: ny fomba fikorianan'ny rano dia ampiasaina amin'ny tsindrona rano, ny maody famafazana dia ampiasaina amin'ny fikosehana, miato kely mba hisorohana ny famaohana. Vatana varahina marihitra, firafitra varahina tsy misy firaka, fitsaboana ambony fotsy avo lenta, tsy harafesina. Ny valizy kapila vita amin'ny seramika dia mihoatra ny fari-piainan'ny indostria, miantoka ny faharetan'ny ain'ny serivisy. Afaka mahatratra ny fifehezana ny mari-pana amin'ny rano tsara indrindra. Ny fonosana dia misy ny fitaovana fitomboana rehetra, ny tsipika famatsiana mangatsiaka / mafana ary ny vatana faucet. Alohan'ny fandefasana dia hojerentsika ny vokatra rehetra hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra. Aza manahy momba ny fividianana.
SKU: EVE-0071-fotsy Sokajy: Fitaovana an-dakozia Tags: Fitaovana an-dakozia, Pull out